Twitter dia hampiditra endrika vaovao maro amin'ny fampiharana amin'ny 2020 | Androidsis
Twitter dia namela andian-baovao ho anay mandritra ity taona ity, toy ny maody maizimaizina izay tonga roa herinandro lasa izay. Ny tambajotra sosialy dia efa manana ny masony voafaritra amin'ny taona 2020, ahafahantsika manantena fanovana vaovao amin'ny asany. Andiam-panovana maromaro izay efa nambara, farafaharatsiny ny faniriana ho tonga tena izy ireo.
Araka izay hitantsika ny sasany amin'ireo vaovao mety ho hitantsika tao amin'ny Twitter tamin'ny taona 2020, izay tsy isalasalana fa hamela ny tambajotra sosialy hitombo hatrany. Ankoatra ny fanomezana fampisehoana tsaratsara kokoa ho an'ny mpampiasa amin'ny fotoana rehetra, satria misy ny vaovao izay nandrasan'ny maro.
Ny iray amin'izy ireo dia ny tsy famelana ny bitsika averina apetraka. Fepetra nandrasan'ny mpampiasa maro, mba hisorohana ny hafatrao sasany tsy ho lasa virus. Inona koa, Twitter dia mitady hisoroka olona tsy hanonona anao raha tsy mahazo alalana, manome ny mpampiasa fifehezana bebe kokoa amin'ity lafiny ity.
Fampisehoana antenaiko fatratra amin'ny taona 2020.
- Esory amin'ity resaka ity aho
- Aza avela RT ity bitsika ity
- Aza avela ny olona @mention izaho tsy nahazo alalana tamiko
- Esory ity @mention avy amin'ity resaka ity
- Alefaso fotsiny ity amin'ny: tenifototra, fahalianana, na ireto namana ireto
- Dantley (@dantley) Novambra 5, 2019
Ny fanovana hafa dia ny fahaizana manala tena amin'ny resaka, raha tsy te ho ao ianao. Azo atao koa ny mamafa ny anaranao, fa nisy olona nanonona anao, tamin'ny resaka tao amin'ny tambajotra sosialy. Ireo dia lafiny tadiavin'ny mpampiasa maro.
Zava-baovao iray hafa izay tokony ho hitantsika ao amin'ny Twitter amin'ny taona 2020 ny an'ny afaka mibitsika zavatra fotsiny ho an'ny namana sasany, ohatra. Ka raha nahita zavatra mahaliana antsika isika dia afaka misafidy izay tianay hizara ity tenifototra ity, na tweet manokana, ohatra. Fampiasana mahaliana iray hafa dinihina.
Ireo no asanao tianao hampidirina, oh.Saingy tsy fantatray raha ho tonga amin'ny Twitter daholo izy ireo amin'ny taona 2020. Toa izany no izy, saingy tsy misy ny fanamafisana amin'izao fotoana izao. Na izany na tsy izany dia hitandrina ny fahatongavan'izy ireo izahay, satria mampanantena izy ireo fa hanova ny fomba fampiasana ny tambajotra sosialy ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Hanolotra andiana fanovana maromaro ny Twitter amin'ny taona 2020
Ahoana ny fampidinana ny Google Stadia ankehitriny fa efa misy ao amin'ny Play Store